Igwe ojii MOLOCO: Ihe Ntugharị, AI-Powered Mobile Ad Solutions for Mobile Apps | Martech Zone
Igwe ojii MOLOCO bụ igwe eji akpaghị aka na-azụrụ ihe maka ngwa ahịa mgbasa ozi gafere usoro mmemme mmekọrịta ụwa na ntanetị mgbasa ozi ngwa. Ugbu a dị ka igwe ojii maka ikpo okwu maka ndị ahịa na ngwa ahịa niile, MOLOCO Cloud na-arụ ọrụ site na teknụzụ na-ahụ maka igwe na-enye ndị na-ere ahịa ekwentị ohere iji nweta data nke mbụ na akara ngosi site na gburugburu usoro mmemme iji mepụta mgbasa ozi mgbasa ozi na-akpaghị aka. arụmọrụ arụmọrụ.
MOLOCO Cloudgwé ojii gụnyere
Exchanges - iru mgbanwe mgbasa ozi mkpanaka gụnyere MoPub (ụlọ ọrụ Twitter), Fyber, Vungle, AdColony, Chartboost, Tapjoy, LINE na ndị ọzọ.
Onye na -ebuli ihe ike - ngwa ohuru ohuru nke n’emezi onodu ego nke mbu na mbu ka ndi mgbasa ozi wee nwee ike nweta ebum n’uche ha ma n’eme ka ha ghara inyefe ya ego.
Mmemme Mmemme - na-agbanwezi na akpaghị aka iji bulie clicks, mgbanwe, ntinye, ihe omume dị na ngwa, laghachi na mmefu mgbasa ozi, ma ọ bụ ebumnuche ndị ọzọ nke ndị mgbasa ozi setịpụrụ.
Adgba Ad Tracking (LAT) ezubere iche - na-ekwe ka ndị ahịa kwụsị iOS na ngwaọrụ gam akporo ndị nyeerela LAT aka, n'agbanyeghị eziokwu na ọ nweghị data nsuso mgbasa ozi gafere. Njirimara ahụ na-arụ ọrụ site na ịchekwa ndị ọrụ dabere na akara ngosi na-abịa site na nnọkọ ngwa ugbu a, ọnọdụ ngwaọrụ, data ọkwa ngwa ngwa, yana akụkụ ndị ọzọ, nke dị site na mmekọrịta na SDK dabere na isi mmalite dị ka Fyber. LAT Ndepụta na-enyere ndị ahịa aka ịnọgide na-arụ ọrụ ọbụlagodi mgbe Apple mere ihe nchọpụta ya pụrụ iche maka ndị mgbasa ozi (IDFA) ịpụ apụ kama ịpụpụ ndị ọrụ.
Igwe ojii MOLOCO na-enyere ndị na-ere ahịa mkpanaka aka igosipụta ndị na-ege ntị nwere ike kpụghachi nloghachi maka azụmaahịa ha gafere na ntanetị mgbasa ozi ngwa ngwa ụwa na ahịa.
Mee ka ozi gị dịkwuo elu na ngwa ngwa ekwentị ruru nde 2.5
Gaa na ihe karịrị ijeri ngwaọrụ 4 zuru ụwa ọnụ ma bulie ezigbo njirimara ọrụ
Nweta ndị ọrụ, ghaghachite, tinyeghachi, kwado, ma bulie uru ndụ niile.
Nwee ihe ngbagha nke oma na ad spend (ROAS) gbadoro anya site na igosiputa ike nke data gi
Ndị na-ere ahịa ngwa ahịa na-enweta njikwa zuru oke na arụmọrụ mgbasa ozi mmemme ha na nghọta zuru oke na data mkpọsa ha na arụmọrụ ha, gụnyere data log data nke ndị ọzọ na-achọghị ịkekọrịta.
Bido na igwe ojii MOLOCO
Tags: Mgbasa oziAdColonyaiAmamịghe echicheikwe optimizerdata-chụpụrụ ad azụtaraeririin-ngwa ad netwọkna-ngwa mgbasa ozilat ichebelata mgbasa ozi nyochalvvngwa igwemobile ad ngwọtamobile ngwa mgbasa ozimobile ngwa mgbasa oziMolocomoloco ojiimgbasa ozi mmemmelaghachi na mgbasa oziiberibeTapawa